Manatsara ny fenitra fiarovana miaraka amin'i Lufthansa ny Turkmenistan Airlines
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manatsara ny fenitra fiarovana miaraka amin'i Lufthansa ny Turkmenistan Airlines
Turkmenistan Airlines (TUA) no hany kaompaniam-piaramanidina ao Turkménistan, misy foibe any Ashgabat. Izy io dia miasa serivisy mpandeha sy entana eto an-toerana sy iraisam-pirenena nanomboka ny 4 Mey 1992.
TUA dia manolo-tena hampiakatra ny zava-bitan'izy ireo aorian'ny fahasahiranana amin'ny fanomezana fahafaham-po ireo fepetra takiana amin'ny EASA (Sampan-draharaha momba ny fiaramanidina fiaramanidina eoropeanina) amin'ny fiandohan'ity taona ity. Nanomboka teo, ny kaompaniam-pitaterana miaraka amin'i Lufthansa Consulting dia namolavola sy nanaiky ny drafitra fanitsiana ary nanomboka nanangana azy ireo ihany koa. Miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny fiaramanidina avy amin'ny Lufthansa Consulting, miasa hatrany ny mpandraharaha amin'ny fanovana ny rafitra fitantanana sy ny fampiharana azo ampiharina. Izany dia misy ny fanatsarana ny rafi-pitantanana lehibe, indrindra ny rafitra fitantanana ny fiarovana sy ny kalitao, ny fampiroboroboana ny antontan-taratasy sy ny fampiharana, ny fiofanana momba ny mpiasa, ny fampiharana rindrambaiko ary ny fividianana fitaovana, ary ny tena zava-dehibe dia ny fanovana kolontsaina ao anatin'ny orinasa.
Ho fanavaozana ny fivoriana voalohany tamin'ny volana martsa, ny fitantanana ny Turkménistan Airlines miaraka amin'i Lufthansa Consulting momba 29 May 2019 nanolotra tatitra fandrosoana momba ny fanatsarana ny fenitra fiarovana ho an'ny ekipan'ny EASA Third Country Operators (TCO), izay mpanolo-tsaina ara-teknika an'ny EU Air Security Committee (ASC).
Mba hahafantarana hatrany ny ezaka mitohy ataon'ny TUA hamahana ny valim-pikarohana voalohany sy ny asa momba ny drafitra fanitsiana notohanan'ny Lufthansa Consulting, dia nankasitraka ny fivoriana fandrosoana manaraka ny EASA nandritra ny tapany faharoa tamin'ny volana Jolay. Ho dingana iray bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ny fanarahan-dalàna, naneho ny fikasany ny hanomboka ny fangatahana ofisialy ny fanombanana ara-dalàna eo amin'ny toerana anaovan'ny EASA ny orinasa. Aogositra 2019.
Manam-pahaizana momba ny fiarovana ny sidina Lufthansa Consulting dia manohy manohana ny TUA amin'ny fitarihana ny fampiharana ny fepetra fanatsarana ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny fandrosoana miaraka amin'ny drafitr'asa feno, izay manarona ny fanatsarana ny SMS sy ny fanaraha-maso ny angon-drakitra momba ny sidina, ny fandaminana indray ny fikambanana CAMO sy ny Fizarana 145, ny fikambanana fikambanan'ny asa an-tany sy ny fenitra amin'ny asa fivezivezena mba hahatratrarana ny fepetra takian'ny fanarahan-dalàna ary hiomanana amin'ny fanamarinana IOSA.
Mandeha mpandeha mihoatra ny 5,000 isan'andro ny zotram-piaramanidina ao amin'ny firenena ary mpandeha efa ho telo tapitrisa isan-taona amin'ny zotra iraisam-pirenena sy anatiny no miaraka. Ny fiaramanidina dia ahitana fiaramanidina maoderina tandrefana (toa ny Boeing 737, 757, 777) ary andian-tsarety mitondra entana IL 76.
Manantena i Bearded Hemingway fa hiady amin'ny lohateny Look-Alike ao Key West
Rixos Premium Dubai JBR dia nandray ny loka 2nd Middle East Chef Excellence Awards